Ọrụ Principles of Dryair Products - Hangzhou DryAir Ọgwụgwọ Co., Ltd
Na mmepụta Filiks, ndị n'ezinụlọ mmetụta nke mmiri na ngwaahịa mgbe a mfịna ...
Air dehumidification bụ a viable mkpebi na ike ga-enweta site na ọtụtụ ụzọ: The mbụ usoro a jụrụ ikuku n'okpuru ya igirigi uche na wepụ mmiri site odide. Nke a na usoro dị irè n'okpuru ọnọdụ ebe igirigi ebe bụ 8 - 10 o C ma ọ bụ karịa; nke abụọ usoro a na-adọrọ mmiri site a desiccant ihe onwunwe. Efere emep uta eri nke impregnated porous hygroscopic mmadụ na-esichara n'ime ụgbụgbọ mmanụ-dị ka ọgba ọsọ. The dehumidification Ọdịdị ya dị mfe, na ike iru -60 o C ma ọ bụ obere site pụrụ iche Nchikota desiccant ihe. The obi jụrụ usoro bụ irè n'ihi na obere ngwa ma ọ bụ ebe iru mmiri larịị moderately achịkwa; n'ihi na ibu ngwa, ma ọ bụ ebe iru mmiri larịị ga-achịkwa ka a nnọọ ala dị larịị, desiccant dehumidification a chọrọ.
DRYAIR Systems ahu nagide obi jụrụ usoro technology, nakwa dị ka desiccant wheel nke cellular Ọdịdị. Dị ka e gosiri na ọnụ ọgụgụ, na moto mere ndị desiccant wheel bugharia 8 ruo 18 ugboro kwa hour, na ugboro ugboro na-amịkọrọ mmiri site a imu ihe, na-enye akọrọ ikuku. The desiccant wheel ekewa mmiri ebe na imu ebe; mgbe mmiri na ikuku na-ewepụ ke mmiri nke ebe wheel, na ikuku mmiri eziga akọrọ ikuku n'ime ụlọ. The wheel ọ etinye obi gị dum mmiri agbagharị na imu ebe, wee regenerated ikuku (ọkụ ikuku) e zigara n'elu wheel si reverse direction, na-achụpụ ndị mmiri, nke mere na wheel pụrụ ịnọgide na-arụ ọrụ.
The regenerated ikuku bụ kpụ ọkụ n'ọnụ na-ma uzuoku heaters ma ọ bụ electric heaters. N'ihi na pụrụ iche Njirimara nke super silicone jel na molekụla-myọ na desiccant wheel, DRYAIR dehumidifiers nwere ike na-aghọta na-aga n'ihu dehumidification n'okpuru nnukwu ichekwa ikuku olu, na izute chọrọ nke nnọọ ala mmiri ọdịnaya. Site kenha na Nchikota, mmiri ọdịnaya nke emeso ikuku nwere ike ịbụ ihe na-erughị 1g / n'arọ nke akọrọ ikuku (hà igirigi mgbe okpomọkụ -60 o C). DRYAIR dehumidifiers anapụta magburu onwe arụmọrụ na-ọbụna mma gosi na ala iru mmiri gburugburu. Iji nọgide na a ufọk ufene okpomọkụ nke akọrọ ikuku, ọ bụ ihe amamihe wetuo obi ma ọ bụ ikpo elu na dehumidified ikuku site na wụnye ikuku-oyi akụrụngwa ma ọ bụ a na-enye okpomọkụ.
2.Principle nke VOC ọgwụgwọ akụrụngwa:
Gịnị bụ VOC concentrator?
VOC concentrator nwere ike n'ụzọ dị irè ọcha na-etinye uche VOCs kwajuru ikuku stream gwụrụ ulo oru ụlọ mmepụta ihe. Site na-achọkwa na-incinerator ma ọ bụ ihe mgbaze mgbake ngwá, ma mbụ ma na-arụ ọrụ na-akwụ ụgwọ nke dum VOC abatement usoro nwere ike ukwu belata.
VOC ịta rotor ka nke n'ụgbụgbọ mmanụ aṅụ inorganic akwụkwọ dị ka a mkpụrụ, nke na High-Silica zeolite (molekụla myọ) na-impregnated. The rotor ekewa 3 zones dị ka usoro, desorption na obi jụrụ zones site casing Ọdịdị na okpomọkụ na-eguzogide ikuku akara. The rotor bụ mgbe niile na-agba gburugburu na kacha adiana ọsọ site a haziri maka moto.
Isi nke VOC concentrator:
Mgbe VOC kwajuru iyuzucha gas-agabiga usoro mpaghara nke rotor nke a nọgidere na-agba gburugburu, na incombustible zeolite na rotor-amịkọrọ VOCs na ọcha gas bụ ike ọgwụgwụ na ihere; VOC etinye obi gị dum nke rotor na-ahụ na-agba gburugburu na desorption mpaghara, ebe etinye obi gị dum VOCs nwere ike desorbed na obere ego nke elu okpomọkụ desorption ikuku na ike lekwasị na akwa ịta larịị (1 ugboro 10). Mgbe ahụ, elu lekwasị VOC gas na-agafere kwesịrị ekwesị post ọgwụgwọ usoro dị ka incinerators ma ọ bụ mgbake usoro; ndị desorbed akụkụ nke rotor bụ n'ihu na-agba gburugburu na jụrụ mpaghara, ebe mpaghara na-mma site obi jụrụ gas. A akụkụ nke VOC kwajuru iyuzucha gas si factory agabiga jụrụ mpaghara na na-agafere a okpomọkụ Exchanger ma ọ bụ a na-enye okpomọkụ na-ewe iwe na tinye n'ọrụ dị ka desorption ikuku.